Dagaal toos ah ma dhexmari karaa Sacuudiga iyo Iiraan? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDagaal toos ah ma dhexmari karaa Sacuudiga iyo Iiraan?
Riyaadh (JigjigaOnline) – Sacuudiga iyo Iiraan waa cadowga isugu xun. Muddo dheer ayuu khilaaf ka dhexeeyay, balse dhowaanahan xaaladdu way sii xumaaneysaa. Hoos ka akhriso sababaha.
Maxaaxaaladda sii xumeeyay?